६० वर्षकी बेहुली २० वर्षका बेहुला,आखिर कसरी जुर्यो त् बिवाह ? पढ्नुहोस। « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । नेपाली संस्कारमा वेहुला र वेहुलीको उमेरको धेरै अन्तर हुँदैन । प्राय वेहुलीको उमेर सानो हुन्छ । पछिल्लो समयमा भने उमेरको खासै म*हत्व राखिदैन । बढी उमेरको युवतीसंग पनि विवाह गर्ने था*लनी भएको छ । तर त्यो प्राय प्रेम विवाहमा हुन्छ । तर कहिले काँही यस्तो पनि हुन्छ जुन कुरा विश्वास गर्न पनि मु*स्किल पर्छ ।
विवाहमा ५, ७ वा १० वर्ष सम्मकै भि*न्नतालाई सामान्य मानिन्छ । तर एउटाको उमेर भन्दा अर्काको उमेर झण्डै तीहाइले ब*ढी भयो भने के होला ? त्यो पनि बेहुलीको । तर प्रेम अ*न्धो हुन्छ भनेजस्तै यहाँ त्यस्तै भएको छ । सुन्दै प*त्यार न*लाग्ने यस बिवाहमा बेहुला बेहुली बिचको उमेर भिन्नता ४० बर्षको छ । र अझ रोचक त के छ भने बेहुला २० बर्षका छन् भने बेहुली ६० बर्षकी । उनीहरुले एक अर्कालाई यति माया गर्छन की यो उमेरले पनि छेकेन ।
यो भारतको उत्तर प्रदेशको मुरादाबाद जिल्लाको रामपुर शहर, सैदनगर गाउँमा भएको घ*टना हो । एक ६० वर्षकी महिलाले २० वर्षका युवकसंग धुमधामले विवाह गरेकी छन् । अहिले यस विवाहको चर्चा आसपासका गाउँ मात्र नभई विश्वभर फैलिएको छ । बेहुला भारत हरदोईका निवासी हुन् । यि दुबैको भेट मिस्डकलबाट शुरुवात भएको थियो ।
खासमा दुई बर्षअघि यि युवाले ग*ल्तीले एक नम्बरमा कल गरेका थिए । उनले फोन डायल गर्दा गर्दै ग*लत नम्बरमा डायल गरे भन्ने थाहा पाए अनि क्या*न्सिल गरे । उता महिलाले भने मिसकल आएको थाहा पाइन् । उनले फोन फर्काइन् । मिसकलवाट सुरु भएको उनीहरुको मित्रता घनिष्ट हुन थाल्यो । फोनमै उनीहरुले संगै बाँच्ने क*सम खाए ।
करिब १२ बिघाकी धनि ती महिलाको पतिको केहि बर्षअघि निधन भइसकेको छ । उनकी विवाह भइसकेकी छोरी पनि छन् । आमाले २० वर्षका उमेरका युवासंग विवाह गर्न लागेको थाहा पाएर छोरीले निकै वि*रोध गरिन् । यो बिषय प्रहरीकोमा समेत पु*ग्यो । तर महिला र युवकले विवाहमा दुबै पक्षको मञ्जुरी भएको बताएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई कार*बाही गर्न सकेन । उनीहरुले धुमधामले विवाह गरे ।